အဲဒီ သမားရိုးကျ လောဂျစ်ကို သံသယဖြစ်
ခြ၊ခြင်၊ ကြွက်နဲ့ ကြမ်းပိုးများ
တုတ်ဝေခေတ် အိမ်တွင်းပုန်း စောင်ခြုံတို့ရဲ့
မုန့်ဝေခေတ် ထမှု ကြွမှု ရွမှု ပဒေသာ။
အား! ခင်ဗျားတို့ တိုင်းပြည်က
ဘယ် လူထုအသံကိုမှ နားမခံသာတာပဲ။
လက်ညှိုးဆီ စိန်လက်စွပ် ဆုတော်ကျဖို့
မဆိုနဲ့ မဆိုနဲ့။ '
အိုကွာ! မဆိုနဲ့ မဆိုနဲ့
''အောင် တပ်မတော်ကြီးလည်း ချီလာပါပြီ'' ကို ဆို
''ဖန်စီဒိုင်း ဖန်စီဒိုင်း ဖန်စီဒိုင်း စွဲနေပြီ သိလား''ကို ဆို
ငို ငို ပြီးဆို။
စိတ်ကို ရွှေပြားလို ခတ်ပါ
ချစ်ဗျူဟာ ချစ်ပရိယာယ် ခြားနားပေမယ့်
တိုင်းပြည်ကို အမှန်ချစ် မဟုတ်လား
ဘယ်သူ့ကိုမှ မပြောပြမိကြပါစို့နဲ့လား မိတ်ဆွေတို့။
Poems San Nyein Oo